Guuleed oo xariga ka jaray Xafiiska Hubinta Tayada Qalabka Dhi... | Universal Somali TV
Sii hayaha Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha, Mahdi Maxamed Guuleed, ayaa maanta xariga ka jaray xafiiska hubinta qalabka dhismaha oo qalabeyn casri ah lagu sameeyay, si uu qeyb uga qaato tayeynta dhismaha guryaha iyo wadooyinka dalka.
Ujeedada hirgelinta xafiiska ayaa salka ku heysa horumarinta tayada dhismayaashada dalka iyo hubinta dhamaan waxybaaha fududeynaya in dhismaha dalka la hagaajiyo si loo helo dhismayaal tayo leh oo u adkeysan kara dabeylaha, roobabka, fatahadaha iyo dhamaam waxyaabaha burburiya dhismooyinka iyo wadooyinka.
Mahdi Maxamed Guuleed oo ballanqaaday in dowladdu ay ka shaqeyneyso hannaankii xafiiska loo ballaarin lahaa ayaa shirkadda dhismaha kula dardaarmay inay Wasaaradda Hawlaha Guud kala shaqeeyaan hirgelinta dhismayaal leh tayada iyo halbeegga heer caalami.
Dowladda ayaa ku howlan hagaajinta iyo horumarinta dhismayaasha dalka, si loo helo waddooyin iyo dhismayaal casri ah oo ka qayb qaata bed-qabka bulshada, horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo dib u kabashada dalka.
Kan-xigaSomaliland oo ganaax lacageed ku rida...
Kan-horeCosoble oo sheegay in wadada Muqdisho...
55,439,898 unique visits